Gaaraan buuxda gacanta maamulka tan soo socota jiilka Tirin oo gacanta ku !.
Milkiile ganacsi ahaan, waa in aad ku wajahayo ee tartanka weyn ee warshadaha. Sidee fiican raali galiyo macaamiisha ah? Sidee fiican maamula ganacsigaaga? Sidee go'aanka ugu fiican u qaadan? Wareegga of walaac weyn yahay. Abacre Maareynta alaabada iyo Control soo jeediyo xal aad kuwaas oo caawin kara qaado tartan this.
Waxaad awoodi kartaa waqti iyo lacag badbaadiyo by iibsato Abacre Maareynta alaabada iyo Control xal ganacsiga.
Waxaad awoodi kartaa bedeli markii gacanta lagu cunaysa hawlaha by qalabaynta la Abacre Maareynta alaabada iyo Control xal ganacsiga.
Waxaad awoodi kartaa aad hawlaha ganacsiga baarid ay sheegayaan wararka statistics faahfaahsan dalab in Abacre Maareynta alaabada iyo Control xal ganacsiga.
Waxaad awoodi kartaa dhiso go'aamada ganacsigaaga ku-waqtiga dhabta ah macluumaad sax ah bixinta by Abacre Maareynta alaabada iyo Control xal ganacsiga.
Waxaad awoodi kartaa maareeyaan qalabka hardware si hufan badan sida printer tigidh, khaanadda lacag caddaan ah, bandhigay line (cirif), screen taabashada, akhristaha barcode (Bar scanner code) by samaynta Abacre Maareynta alaabada iyo Control xal ganacsiga.
Waxaad awoodi kartaa ka faa'iidaystaan ​​nidaamka maarmaan iyada oo xafiisyo hore iyo xagga dambe ah Abacre Maareynta alaabada iyo Control xal ganacsiga.
Waxaad awoodi kartaa magalka Soomi waayo-aragnimo macaamiisha ah iyo gaarsiinta adeegga fiican iyadoo la isticmaalayo Abacre Maareynta alaabada iyo Control xal ganacsiga.
Waxaad awoodi kartaa takooraan xilalka ka mid ah shaqaalaha si aad uga musuqmaasuq yareeyo by codsanaya beegyada ammaanka ah Abacre Maareynta alaabada iyo Control xal ganacsiga.
Waxaad awoodi kartaa ka tagto hotel shaqeeya gacanta la Abacre Maareynta alaabada iyo Control xal ganacsiga.
Waxaad awoodi kartaa shakhsiyeeyo design uu awoodo ah Abacre Maareynta alaabada iyo Control xal ganacsiga.
English , Afrikaans , Albanian , Arabic , Armenian , Azerbaijan , Basque , Belarus , Bengali , Bosnian , Bulgaria , Catalan , Somali , Chinese (Fudud) , Chinese (Traditional) , Croatia , Czech , Danish , Dutch , Isberento , Istooni , Filipino , Finland , Faransiiska , Galician , Joorjiya , German , Greek , Gujarati , Creole Haitian , Hausa , Hebrew , Hindi , Hmong , Hungary , Ayslandhiik , Igbo , Indonesian , Irish , Talyaaniga , Japanese , Javanese , Kannada , Khmer , Korean , Lao , Latvian , Lithuanian , Macedonian , Malay , Maltese , Maori , Marathi , Mongolian , Nepali , Norwegian , Persian , Polish , Portuguese , Punjabi , Romanian , Russian , Serbian , Slovak , Slovenian , Somali , Spanish , Swahili , Swedish , Tamil , Telugu , Thai , Turkish , Ukrainian , Urdu , Vietnamese , Welsh , Yiddish , Yoruba , Zulu